Aaladda Qarsoon ee loo yaqaan 'WiFi Spy Hidden USB 5-USB Port Charger Camera, Baadi goobka Mooshinka, Diiwaanka Loop', Kicinta taleefanka (SPY202) | Xalka OMG
【View Remote View Wireless】 Muraayad aan la arki karin oo leh xagal 90-degree ayaa lagu dhisay buunshahan USB-ga ah ee "Camera". Waxaad u isticmaali kartaa adigoo adeegsanaya saldhig kombiyuutar ah, sidoo kale kamarad. 1080P / 720P / 640P Heerka Xalinta waxaa loo helli karaa gacanta si waafaqsan xaaladaada network. Marka kumbuyuutarkan kumbuyuutarku uu isku xiro wifi, waxaad si sahlan u kormeeri kartaa guriga, bakhaarada ama dukaanka. Kuugu fiican ammaanka guriga iyo wax kasta oo aad ka daryeesho.
【Alarm Detection Alarm】 Nidaamka lagu ogaan karo dhaqdhaqaaqa dareenka la qabsoomay oo lagu qalabeeyo kamaradahan USB. Marka la ogaanayo dhaqdhaqaaqa dhaqaaqa, waxaad heli doontaa ogeysiinta taleefankaaga. Waxa kale oo ay sawirtaa sawirada oo ay ku kaydsan yihiin APP si toos ah, ma seegi doonto wax xiiso leh. Fogaanta muraayada muraayada waxay noqon kartaa ilaa 9.8ft.
【Micro SD Recording & Loop Recording】 Camera waxay taageertaa kaadhka xusuusta ilaa 64GB (kuma jiraan). Waxaa loogu talagalay diiwaan gelinta dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa, duubista 24-saacad iyo duubista fiidiyowga waqti-gaaban. Waxa kale oo ay taageertaa duubista bareegga. Marka kaarka SD-ga uu buuxsamo, wuxuu si toos ah ugu qori doonaa faylka ugu da'da leh ee ugu cusboonaaday. Maxay tahay in aad si toos ah u daawan kartid qoraalka APP kaas oo lagu keydiyay kaarka sd, adigoo aan kaarka kaarka qaadin.
Xidhiidhada badan ee USB-ga】 5-USB Port waxay leedahay is-waafajin balaadhan oo bixin kara qalab badan oo USB ah isla waqti isku mid ah si loo daboolo baahidaada awoodaada damaanada badbaadada. 4.7 ft fiilada korontada waa muddo dheer oo ku filan in batroolku u sii dheeraado. Ma aha oo kaliya kamarad mini, laakiin sidoo kale saldhig ku-ool ah oo ku haboon.
Sawirada Farsamada Sawirada
Sicirka Khilaafka: 1080P / 720P / 640P
Rate jir: 15fps
Muuqaalka Muuqaalka: Degree 90
Heerkulka Operating: -10-60 shahaadada jaamacadda
Raadinta Muwaadiniinta Sawir gacmeedka: Xadhiga tooska ah ee mitirka 3
Nooca Kaarka Maqalka: Kaarka Micro SD
Awoodda ugu badan ee kaadhka xusuusta: 64GB
Software Software: Kombiyuutarka KM / MX / VLC
Nidaamka Nidaamka Kumbiyuutarka Windows
Nidaamka Nidaamyada Gacanta: IOS / Android
Imisa kamarado ayaa APP ku xiran kartaa: 8
Imisa telefoon ayaa kamarad ku xiran kartaa isla waqti isku mid ah: 4
Wareegga DC ee USB: 5V
DC hadda ee USB: 0.5A*1/1.0A*2/2.1A*2
Muddada Xuddunta: 4.7ft
3306 Wadarta Views 8 Views Maanta